शुन्य समय : October 2021
दशैँ महिमा तथा महत्व
दशैं वा बडा दशैं (अन्य नाम: दशहरा, विजया दशमी नवरात्र आयुध-पूजा नेपालीहरूको प्रमुख चाड मानिन्छ । राष्ट्रिय चाड समेत मनिने दशैं (नवरात्र) हिन्दु धर्मवलम्बीहरूले आश्विन महिनाको शुक्ल प्रतिपदा का दिनदेखि नवमी सम्म (नवरात्रभर) शक्तिको आराधना गरी दशौँ दिन विहान दशमी का दिन आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूको हातबाट टीका-प्रसाद ग्रहण गरेर विशेष रूपमा पुर्णिमा सम्म (प्रसाद ग्रहणका लागि) मनाउने गर्छन् । आश्विन शुक्ल प्रतिपदा (घटस्थापना)मा जमरा राखी नवमीसम्म नवरात्र विधिले प्रत्येक दिन फरक देवीहरूको पूजा हुन्छ ।
1. पश्चिम बङ्गाल उत्तरी जिल्लाहरू जसमा दार्जिलिङ्ग, जलपाईगुडी हुन्।
2. भुटान देश।
4. भारतका उत्तर-पूर्वी नेपाली बसेका राज्यहरू जस्तै मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्यान्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखण्डको देहरादून आदि।
5. विश्वका ती स्थानहरू जहाँ नेपालीहरू बसोबास गर्दैछन् ।
पश्चिम बङ्गालमा यो पर्व दुर्गा पूजाको रूपमा नै मनाइन्छ। यो बङ्गालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व हो। बङ्गालमा पाँच दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। यहाँ देवी दुर्गालाई भव्य सुशोभित पण्डालहरूमा सजाइन्छ। देशका नामी कलाकारहरू बोलाएर दुर्गाको मूर्ति तैयार गरिन्छ। यसका साथै अन्य देवी द्वेवताहरूको पनि मूर्तिहरू बनाइन्छ। पर्वको समयमा शहरका सानातिना स्टालहरू पनि मिठाईले भरिन्छन्। यहाँ षष्ठीको दिन दुर्गा देवीको बोधन, आमन्त्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा आदिको आयोजन गरिन्छ। त्यसपछि सप्तमी, अष्टमी एवं नवमीका दिन प्रातः र सायंकाल दुर्गाको पूजामा व्यतीत हुन्छन्। दशमीको दिन विशेष पूजाको आयोजन गरिन्छ। प्रसाद चढाइन्छ र प्रसाद वितरण गरिन्छ। पुरुष आपसमा आलिंगन गर्दछन्, जसलाई कोलाकुली भनिन्छ। स्त्रीहरूले देवीको शीरमा सिंदूर चढाउँछन् र देवीलाई आँशु झार्दै विदाई दिन्छन्। यसका साथै उनीहरू आपस्तमा पनि सिन्दूर लगाउँछन् र सिन्दूर खेल्छन्। यस दिन यहाँ नीलकंठ पक्षीको दर्शन शुभ मानिन्छ। त्यसपछि देवी प्रतिमाहरूलाई ठूला-ठूला ट्रकहरूमा हालेर विसर्जनको निम्ति लगिन्छ। विसर्जनको यो यात्रा पनि साह्रै शोभनीय र दर्शनीय हुन्छ।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटकमा दशहरा नौ दिनसम्म चल्छ जसमा तीन देवीहरू लक्ष्मी, सरस्वती र दुर्गाको पूजा गरिन्छ। पहिला तीन दिन लक्ष्मी - धन र समृद्धिकी देवीको पूजन हुन्छ। दोस्रो तीन दिन सरस्वती- कला र विद्याकी देवीको अर्चना गरिन्छ र अंतिम दिन देवी